.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: သူရိန်လင်း ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်း အသစ်နဲ့ Flash Songs Album
သူရိန်လင်း ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်း အသစ်နဲ့ Flash Songs Album
ကျွန်တော့်ရဲ့ Flash Songs ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း များ အားလုံး မင်္ဂလာပါနော်..
ဒီနေ့တော့ ဘယ်သူမှ အခုလို Flash Songs Album မျိုး မလုပ်သေးဘူး ထင်တာပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်လိုက်တာပါ။
အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ.. နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းပြီး သိမ်းထားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
MP3 သီချင်း နားထောင်ရသလို ပဲ ဖြစ်နေမလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော် ဒီလိုလေး လုပ်ရတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ်နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ
အလွယ် တကူနားထောင်လို့ လွယ်အောင်ပါ။ အဲလိုဆိုတော့ Flash ဖိုင်က အဆင်ပြေတယ်လေ..
နောက် Mp3 လိုချင်တဲ့လူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ချုံ့ပေးထားပါတယ်။
Flash Song လုပ်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား ပြောကြမယ်..အဲဒါက ဒီလိုပါ..Flash Song ကျတော့
လုပ်ထားတာက လှပါတယ် ..စာသားတို့ အဖက်တို့တွေနဲ့ သူက အဲဒီသီချင်းကို ထိုင်ကြည့်နေမှ
ကောင်းတာ။ ကျွန်တော့်ကတော့ Flash Song တွေကို သိပ်ထိုင်ကြည့်နေလေ့ မရှိပါဘူး။
သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်နေတတ်လို့ပါ။
လောလောဆယ်ကတော့ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ကို Album တစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ အနေနဲ့လည်း ကြည့်ပြီးတော့ ဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်..အားပေးမယ်
ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း အဲလို သူငယ်ချင်းတို့ တောင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို
Album လေးတွေ လုပ်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်လို့.....
မှတ်ချက်။ ။ Background ကတော့ သားသားလေးရဲ့ဆိုဒ် http://amaetharr.multiply.com/ ကပါ။
Posted by Thurainlin at 05:51